सिरियन युद्धमा ‘नाटो’ ध्रुवीकरणः पुटिनले अमेरिकालाई दिए कडा चेतावनी, अब के हुन्छ ?
चेतावनी पछि अमेरिका हडबडायो, सैन्य आक्रमण गरे जे पनि हुन सक्छ
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । दोस्रो विश्वयुद्ध अघिको सैनिक गठबन्धनलाई सम्झाउने गरी सिरियामा अमेरिका, बेलायत र फ्रान्स एक ध्रुवमा उभिदै सिरियामाथि हमाला गरेका छन् । हमाल पछिको प्रतिक्रिया दिदै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई कडा चेतावनी दिएका छन् ।
उनले चेतावनी दिँदै सिरियामा फेरि कुनै सैन्य आक्रमण भए त्यसको प्रतिक्रिया जे पनि हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यो चेतावनी पछि अमेरिका सैन्य फिर्ता गर्न हतारिएको छ ।
सिरियाको डुमामा रासायनिक आक्रमण भएको आरोप लगाउँदै शनिबार अमेरिकी नेतृत्वमा बेलायत तथा फ्रान्सेले संयुक्त आक्रमण गरेका थिए । सिरियाका तीन ठाउँमा बमबाडी गरेका छन् ।
त्यसको क्षति के कति भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि बाहिर आएको छैन ।
सिएनएन र बिबिसीले समेत उक्त बमबाडीको मानवीय क्षति बाहिर नल्याउनुमा युद्धपक्षधरता देखाएको आरोप यी अन्तर्राष्ट्रिय न्युज एजेन्सीमाथि लागेको छ ।
यस अघि रुसले सिरियन सरकारको पक्षमा विद्रोही सैनिक दबाउन सहयोग गरेको थियो भने अमेरिका लगायत पक्षहरु विद्रोहीलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छन् ।
यसले तेस्रो विश्वयुद्धपूर्वको शीतयुद्धकालीन अवधि भन्ने संज्ञा पनि पाएको छ ।
नयाँ शीत युद्ध
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरुले सिरियामा पश्चिमा राष्ट्रको आक्रमणपछि रुस र अमेरिकाको सम्बन्ध अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्तरमा कायम हुने बताएका छन् ।
पछिल्लो हप्तादेखि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सिरियाका समर्थक तथा आलोचक देशका अखडा बनेको छ ।
शुक्रबार संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुट्रेसले सिरियाको लडाईँ विश्व सुरक्षा तथा शान्तिका लागि चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन् ।
महासचिव गुट्रेसले बढ्दो शीत युद्धका कारण दशकौँ पहिले देखिएको समाधानको विकल्प पनि अब नरहेको बताएका छन् ।
रुसको आक्रोस ?
रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भ्लादिमिर पुटिनले यदि संयुक्त राष्ट्र संघको चार्टरको उल्लंघन भएमा त्यसले विश्वमा भयावह अवस्था सिर्जित हुन सक्ने बताउनुभएको छ ।’
साथै रुसी राष्ट्रपति कार्यालयले यही विषयमा रुसी राष्ट्रपति पुटिन र इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीबीच टेलिफोन वार्ता भएको बताएको छ ।
दुवैले सिरियामा भएको आक्रमपछि सिरियाको राजनीतिक संकट समाधानका लागि भैरहेको प्रयासमा नोक्सान भएको बताएका छन् ।
सिरियाको दमास्कस र होम्समा भएको सैन्य कारवाहीपछि अमेरिकाले राष्ट्रपति बशर अल असदमाथि दबाब बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
आइतबार संयुक्त राष्ट्र संघका लागि अमेरिकी राजदूत निकी हेलीले सिरियाली सरकारसँग सम्बन्ध कायम भएका रुसी कम्पनीलाई आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने बताएका थिए ।
प्रतिबन्धका लागि रुस तयार
सिरियामा भएको आक्रमणपछि संयुक्त राष्ट्र संघमा निन्दा प्रस्ताव पास गर्न असमर्थ रहेको रुसले अमेरिकाको आक्रमणलाई निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ ।
सिबिएस टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै निकी हेलीले सोमबार सिरियाको कथित रासायनिक आक्रमणलाई सघाइरहेका सिरियाली कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बताएका छन् ।
साथै रुसी संसदको माथिल्लो सदनको रक्षा समितिका उपनिर्देशक एवगेनी सेरेब्रेनिकोवले रुस जस्तोसुकै प्रतिबन्धका लागि तयार भएको बताएका छन् ।
सरकारी समाचार संस्था आरआईएले सेरेब्रेनिकोवलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘प्रतिबन्धले हामीलाई कठिन अवस्थामा पक्कै धकेल्छ, तर हामीलाई भन्दा यसले अमेरिका र यूरोपलाई बढी क्षति पुग्नेछ ।’
अप्रिल ७ मा डुमा भएको भनिएको रासायनिक आक्रमणपछि शनिबार अमेरिका, फ्रान्स र ब्रिटेनले साझा सैन्य कारवाही गर्दै सिरियाका विभिन्न ठाउँमा एक सयभन्दा बढी मिसाइल आक्रमण गरेको थियो ।
अमेरिकाले आक्रमण गरेका ती ठाउँहरुमा सिरियाली सरकारले रासायनिक हतियार बनाउँदै आएको आरोप लगाउँदै आएको छ । तर, त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।